के 'हाउसफुल ४' सँग डराएकै हो त ‘घामड शेरे’ ? | Kendrabindu Nepal Online News
के ‘हाउसफुल ४’ सँग डराएकै हो त ‘घामड शेरे’ ?
७ कार्तिक २०७६, बिहीबार १६:०३
यही कात्तिक ८ गतेबाट प्रदर्शन हुने भनिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘घामड शेरे’ को प्रदर्शन मिति अन्तिम समयमा आएर पछि सरेको छ । ‘घामड शेरे’ संगै बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको बहु प्रतिक्षित चलचित्र ‘हाउसफुल ४’ पनि प्रदर्शनमा आउने भएपछि ‘घामड शेरे’ को प्रदर्शन मिति कात्तिक २२ लाई सारिएको हो ।
प्रदर्शन मिति सरेपछि कतिपयले ‘हाउसफुल ४’ का कारण डराएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । अपेक्षित ‘शो’ नपाएकोले चलचित्र सरेको भनि निर्माण पक्षले जानकारी दिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा ‘हाउसफुल ४’ संग डराएरै मिति सारिएको भनि धेरैको टिप्पणी रहेको छ ।
आफुले निकै आशा राखेको चलचित्र अन्तिम समयमा आएर मिति सार्नु परेपछि मुख्य नायक निश्चल बस्नेतले फेसबुक स्टाटसमार्फत आक्रोश पोखेका छन् । उनको यो आक्रोश वितरक, हल साहुहरू र उनका निकटका केही चलचित्रकर्मीहरु लक्षित देखिन्छन् ।
काठमाण्डौको क्यूएफएक्सले आफ्नो चेनमा दुई नेपाली चलचित्रलाई भन्दा हिन्दी चलचित्र ‘हाउसफूल ४’लाई चार गुणा बढी ‘शो’ उपलब्ध गराएका थिए । यसैको प्रत्यक्ष असर ‘घामड शेरे’ लाई परेको हो । बिदेशी चलचित्रको सवालमा केहि कलाकारहरुले विरोधात्मक आवाज पनि उठाउदै आइरहेका छन् । तर पनि आफ्नो डेटमा बिदेशी चलचित्र आउँदा नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन मिति सार्नुपर्ने बाध्यता अझैपनि हटेको छैन ।
‘घामड शेरे’ सरेपछि यसको फाइदा शिशिर राणा निर्देशित फिल्म ‘पोइ पर्यो काले’ लाई भएको छ । पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, श्रृष्टी श्रेष्ठ अभिनित चलचित्र ‘पोइ पर्यो काले’ले अहिले देशभर एकल रिलिजको अवसर पाएको छ ।
विदेशी फिल्मको प्रभावमा नेपाली फिल्म सर्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन । हलिउड र बलिउड फिल्मको प्रदर्शन मितिले नेपाली फिल्मको प्रदर्शन मिति सरेको धेरै उदाहरण छन् । हलिवुड फिल्म ‘एभेन्जर्स–४ इन्डगेम’को कारण ‘दाल भात तरकारी’ र जात्रै जात्राले प्रदर्शन मिति सारेको थियो । जसको असर तिन नेपाली चलचित्र ‘कप्स’, ‘वीर विक्रम–२’ र ‘प्रेम दिवस’ लाई समेत परेको थियो ।
त्यसैगरी हिन्दि फिल्म ‘साहो’को कारण ‘हजार जुनीसम्म’, ‘दयारानी’ र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सरेको थियो । त्यस्तै ‘स्टुडेन्ट अफ दि इयर–२’ को कारण जात्रै जात्रा, ‘वार’ को कारण दिपक-दीपाको ‘छ माया छपक्कै’ को प्रदर्शन मिति पनि प्रभावित भएको थियो ।
ghamad shere, Nishchal basnet
Prevछात्रालाई जिउँदै जलाउने १६ जनालाई बंगलादेशमा मृत्युदण्ड
पहिलो महिला क्रिकेट लिग च्याम्पियनको उपाधी चितवनले जित्योNext
चलचित्र ‘घामड शेरे’ को टिमले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर दियो प्रस्टीकरण (भिडियो सहित)
निश्चलको आक्रोश- ‘चलचित्र नचले पोस्टर च्यातेर फालियोस् तर समयमै रिलिज हुन पर्छ’
बच्चाको बारेमा स्वस्तिमाको प्रतिक्रिया- ‘ढिलो आउँछ, कडा आउँछ’ (भिडियो सहित)